“Fitaovana tahaka ny imprimerie ny mpanakanto” - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Ny mpanakanto na artista dia olom-pirenena tahaka ny olom-pirenena feno rehetra ka manana safidy politika ary indrindra afaka maneho izany safidy izany
” hoy Rabesaiky Guillaume fantatra kokoa amin’ny solon’anarana hoe Om-Gui.
“Olom-pirenena feno ny mpanakanto afaka ary tokony mandray anjara amin’ny fiainam-pirenena izy araka izany” hoy ity mpanakanto mpamorona ny tarika Ny Ainga.
Om-Gui dia iray amin’ireo mpanakanto efa nirotsaka teo amin’ny sehatra politika. Efa solom-bavam-bahoaka tany Ambohimahasoa. “Mbola any ihany aho no milatsaka satria mitaky ny filatsahako ny vahoaka any” hoy izy. Nambarany fa raha ny lojika no hajaina dia amin’ny toerana misy herinaratra izy no tokony milatsaka satria eo no maro ny olona mandre sy tia ny kantony. “Averiko fa ireo vahoaka no mangataka ny hilatsahako” hoy izy. Avy any an-tanàna ny mpanakanto Om-Gui. Raha izay tokoa no zohina dia tsy ny firehan-kevitra no mavesa-danja fa ny fihaviana.
Tahaka an’i Om-Gui dia milatsaka ho kandida koa ny mpanakanto Rackhiki. Nisy ny hira nampalaza an’ity mpanakanto ity. Fa isan’ny nampalaza azy koa ny resaka fanodinkodinana zazavavy. Nampigadra azy mihitsy izany. “Mampalahelo izay satria io fanagadrana ahy noho ny adiko tamin-dRandrianasolo io no tsaroan’ny olona. Tsy fantatry ny olona fa nisy koa ny fanagadrana ahy noho ny fiarovako ny zon’ny mponina noho ny resaka fangalarana tanin’olona nataon’ny vahiny iray” hoy ity mpanakanto ity. Mandray anjara feno anatin’ny fiaraha-monina ny tenany no tiany ambara. Tany Toamasina no nitranga izany fanagadrana azy izany. Tsy any Toamasina anefa izy no nilatsaka ho kandida fa… any Vohipeno tanàna nihaviany. Tahaka ny hita anatin’ny tontolon’ny mpanao politika ihany izany ny fahitana an’ireto mpanakanto ireto raha izany. Manamafy ny fisafidianana noho ny fihaviana na vote régionale na koa vote ethnique mihitsy aza.
Tranga isan’ny nisongadina tamin’ity propagandy nivalona teo iny ny fandraisan’ny mpanakanto anjara mavitrika. “Efa fahita hatramin’izay ny fandraisan’ny mpanakanto anjara manafana famoriam-bahoaka” hoy i Rackhiki. Na propagandy politika io na propagandy ara-hevitra hafa (fanentanana amin’ny ady amin’ny sida na hafa…) dia antsoina tokoa ireo mpanakanto. “Tsy manaitra antsika ny fandraisan’ny mpanakanto anjara amin’ny fanentanana ny olona hanasa tanana. Tsy manaitra antsika koa ny fisian’ny mpanakanto tsy mba mahazo contrat mihitsy raha vao tsy mitovy firehan-kevitra amin’ny mpitondra ilay artista” hoy ity mpanakanto iray nisafidy ny tsy ho tonina anarana.
Nandray anjara mavitrika tamin’ny propagandy ireo mpanakanto. Nisy tamin’ireo kandida no namoronana hira maromaro ary mpamoron-kira samy hafa no nandray anjara. Nisy ireo kandida naka mpanakanto maromaro nanentana teny an-kianja. Nentina nitety firenena mihitsy ireny mpanakanto ireny. “Fitaovana izany ireo mpanakanto amin’izay fotoana izay. Fitaovana tahaka ny fampiasana imprimerie” hoy Om-Gui. “Ny tompo-na imprimerie iray dia tsy voatery hankato ny fandaharana entina hatonta ao aminy” hoy ity mpanakanto ity nanohy ny fanazavany. Tsy voatery ho resy lahatra amin’ny programan’ny kandida velively ireo tarika manentana. Fitaovana ny mpanakanto. Mpikarama izy. Orinasa ny tarika iray izay tsy maintsy velomina. Tsy miantso ny mpankafy azy izy amin’ny fanentanana handraisany anjara. Ny tsapa dia nisy “guichets fermés” hatrany ny famoriam-bahoaka izay nentanina mpanakanto malaza. Tsy nivadika ho safidy anefa izany raha ny vokatra navoakan’ny vata no itarafana azy. Fitaovana tsy mahomby raha izany.
Maromaro ireo mpanakanto nirotsaka ho kandida. Ankoatran’izy roa lahy voatonona teo dia eo koa i Anyah, i Jaojoby, i Tirike, i Hanitra… Singanina manokana i Rossy. Nilaza ity farany fa tsy handray anjara amin’ny fanentanana politika intsony. Izao izy io kandida io. Ampy izay ny mitsemboka ho an’ny hafa ! no azo andraisana ny fanapahan-keviny. Tahaka ny mpandraharaha mirotsaka ho kandida filoham-pirenena ireny ny fahitana azy. Leo manome vola ho an’ireo kandida ny mpandraharaha dia aleony mirotsaka mivantana dia tsy mandany vola ho an’ny hafa izy amin’izay.
“Ny hafatro ho an’ny mpanakanto namana nilatsaka dia aoka ho mpanakanto manana niveau mandritra ny fampielezan-kevitra fa tsy irefarefa” hoy Om-Gui. “Tsy miova aho fa efa nitolona tany anaty tononkira ary mbola mitohy izany amin’ny firotsahako. Aoka tsy hisy fihatsarambelatsihy” hoy kosa i Rackhiki na Razafimiary Jules Christian. Izy roa lahy dia samy resy lahatra fa ny fitombon’ny isan’ny mpanakanto ao anatin’ny antenimiera mpanao lalàna dia hanampy amin’ny fiarovana ny mpanakanto amin’ny asa ratsin’ny pirate ! Efa nisy ny lalàna miaro ny asan’ny mpanakanto sy manenjika ny piraty fa ny didy fampiharana no mbola tsy nivoaka hatramin’izao. Mpanara-maso ny asan’ny mpanatanteraka ny depiote ka ho afaka hanara-maso tokoa. Nofy ? Manonofy antoandro izay tokoa no fandraisana ny mpanakanto.